एमसीसीले बनाउँदै छ नयाँ सत्ता समीकरणको आधार, के ओली र देउवा एक ठाउँ उभिएलान् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
एमसीसीले बनाउँदै छ नयाँ सत्ता समीकरणको आधार, के ओली र देउवा एक ठाउँ उभिएलान् ?
एमसीसी विवादले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेको छ भने मौजुदा सत्ता समीकरण अब थप अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा
२०७८ भाद्र २७, आईतवार १८:१०:००
काठमाडौँ । अमेरिकाको ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रहेको एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्न आतुर देखिए पनि गठबन्धनका अरु दुई प्रमुख साझेदार घटक तयार भएका छैनन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने एमसीसी पारित गर्न सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागिपरेका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि निकै जोडबल गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी र हालका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि साथ दिने बताएका थिए । तर, त्यसबेलाकै सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रचण्डदेखि भीम रावलसम्मले विरोध गरेका थिए । कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मका सभामुखले प्रचण्डकै इशारामा सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव नै लुकाइदिएका थिए । अहिले पनि सभामुख सापकोटाले संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाएसम्म एमसीसी अनुमोदनका लागि मतदानसमेत हुन मुस्किल छ ।
एमसीसी विवादले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेको छ भने मौजुदा सत्ता समीकरण अब थप अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । राष्ट्रिय महत्त्वका जल्दाबल्दा मुद्दामै एकमत हुन नसक्ने गठबन्धन टिक्नुपर्ने कुनै कारण, बाध्यता वा औचित्य पनि देखिँदैन । बरु ओली र देउवा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
ओली र देउवाको गठबन्धन हुने हो भने अरु कुनै झिनामसिना दल र तिनका सांसदलाई फकाइरहनुपर्ने विवशता नेतृत्वलाई हुने छैन । कांग्रेस र एमाले मिलेमा एउटा यस्तो बलियो गठबन्धन बन्नेछ, जसले राष्ट्रिय महत्त्वका जल्दाबल्दा विषयमा तत्काल निर्णय हुन सक्नेछ । कम्तीमा साझा गठबन्धन बनाइसकेपछि न्यूनतम विषयमा साझा सहमति बन्नेछ । हरेक मुद्दामा दसथरी विचारलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने छैन । दसतिर फर्केका अनुहारलाई मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको जस्तो जटिलता बेहोर्नुपर्ने छैन । देउवाले ओलीलाई र ओलीले देउवालाई मनाउन सके सरकार र संसदबाट तत्काल निर्णय गराउन सकिनेछ ।
देउवा र ओली एक ठाउँमा हुनेबित्तिकै एमसीसी त अनुमोदन हुने नै छ, साथसाथै बजेट, अध्यादेश, निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया पनि विवादरहित तवरले अघि बढ्नेछन् । संसद निर्बाध तवरले चल्नेछ । मुलुक एक नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चल्नेछ । सरकार सञ्चालनका लागि पनि धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने छैन । प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठजस्ता व्यापारीलाई फकाएर राख्नुपर्ने र मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । संविधानभित्रैबाट र संसदले नै नयाँ सरकार जन्माउनेछ । नयाँ खिलराज जन्मिने सम्भावनाका ढोका पनि यसले थुनिदिनेछ । संविधानले खनेको बाटोभन्दा बाहिर गएर गरिने नयाँनयाँ राजनीतिक प्रयोग र बाह्य शक्तिका चलखेलका प्रयासलाई समेत यसले तुहाइदिनेछ ।
समयमै नयाँ निर्वाचन भएमा मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर हुनेछ । नेताका अहिलेसम्मका व्यवहार र कार्यशैलीका आधारमा जनताले ठीक–बेठीक छुट्याउन पाउनेछन् । लोकतन्त्रलाई घात गरेका, भ्रष्टाचारमा डुबेका र बाह्य शक्तिको प्रभावमा देशभित्र अस्थिरताको भाँडभैलो मच्चाउन गोटी बनेकाहरुलाई सजाय दिने उचित मौका मिल्नेछ । यसकारण पनि देउवा र ओली एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
यसै पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल देउवालाई असफल बनाउन लागिपरेकै छन् । त्यही कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत हुन सकेको छैन । एमसीसीमा विरोध गरेर कूटनीतिक रुपमा समेत देउवालाई अप्ठेरोमा पार्ने काम हुँदै छ । यी सबै चलखेललाई असफल पार्नका निम्ति पनि देउवा र ओलीले हात मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रचण्ड र माधवलाई तत्काल प्रतिपक्षको कित्तामा नधकेल्ने हो भने देउवा नराम्रोसँग धोका खानेछन् ।